Inka Badan 50 Ka Tirsan Maleeshiyaatka LIYUU BOOLIS oo Lagu Dilay Bakool iyo Gedo | Voice Of Somalia
Posted on August 28, 2015 by Voice Of Somalia Standard
Wararka ka imaanaya Bakool iyo Gedo ayaa sheegaya in dagaal xoogan uu ka dhacay deegaanka Kulan-jareer oo dhaca wadada isku xirta degmooyinka Xudur iyo Waajid oo ka wada tirsan gobalka Bakool.
Dagaalka waxa uu yimid kadib markii ciidamada Shabaab weerar culus ku qaadeen difaacyada maleeshiyaadka LIYUU BOOLIS ee degaanadaas Xabashido ku soo daabushay ka dib markii la waayay ciidamo degaanada ah oo Xabashida la dagaal gala.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in dagaalka lagu dilay inka badan 50 ka tirsan maleeshiyaadka Liyuu Booliska oo kabo qaad u ah ciidamada Xabashida Itoobiya,waxaana meydadka gudaha iyo duleedka deegaanka lagu arkay ku jira saraakiil ciidan oo ka tirsan maamulka Baydhabo ee Shariif Xasan.
Ciidamada Alshabaab ayaa si buuxda ula wareegay gacan ku heynta deegaanka Kulan-jareer’waxeyna sidoo kale Alshabaab gacanta ku dhigeen ganiimo fara badan oo ay kala wareegeen maleeshiyaadkii ee laga saaray deegaankaasi.
-Dhanka kale ciidamada Alshabaab ayaa dagaal la’aan kula wareegay deegaanka Ceel-ansaar ee gobalka Bakool kadib markii deegaankaasi ay isaga carareen maleeshiyaadkii Liyuu booliska ee duulaanka ku joogay deegaankaasi.
Dhanka kale Dagaalka ugu xoogan ayaa ka dhacay gobolka Gedo, kaasi oo lagu dilay Maleeshiyaad badan oo ka tirsan kuwa liyuu boolis, sida saraakiil ciidan oo magacyadooda in la xuso ka gaabsadeen ay sheegeen.
Goobjoogayaal sheegayaa in lagu qiyaasayo ku dhawaad 25 askari kuwaasi oo garab siinayay ciidamada Xabashida ee duulanka kusoo gayiga Soomaaliyeed.
Waxaa fashil iyo foolxumo ku sii dhamaanaya weerarkii Xabashido ku soo qaaday gayiga Soomaaliyeed meel walba, waxayna go’doon ku yihiin meel walba oo ay indho la’aan tageen sida Xudur,Waajid, Baardheere iyo Diinsoor.
-Dhanka dagaallo is xigxigay oo ciidamada Al Shabaab ku qaadayeen saldhigyada ciidamada Itoobiya iyo maleeshiyaadka dabadhilifyada u ah ayay Al Shabaab u suurtagashay in ay qabsadaan deegaanka Xawaal-Barbaar.
Wariye ku sugan gobolka Bay ayaa soo sheegay in ciidamada xabashida Itoobiya ay xalay maqribkii isaga baxeen deegaanka iyadoona si buuxda ay ula wareegeen ciidamada Al Shabaab.